गुल्मीका शिक्षकलाई कसरी संक्रमण भयो कोरोना ? यस्तो छ नालीबेली… « Janata Samachar
गुल्मीका शिक्षकलाई कसरी संक्रमण भयो कोरोना ? यस्तो छ नालीबेली…
प्रकाशित मिति : जेठ ८, २०७७ बिहीबार
गुल्मी । गुल्मीमा एकजनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर मृत्यु भएसँगै जिल्लामा त्रास फैलिएको छ । जिल्लाको मदाने गाउँपालिका ६ पुर्कोट दहस्थित एक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्लामा त्रास फैलिएको हो । तर उनलाई कसरी कोरोना पुष्टि भयो भन्नेबारे भने सबै अनभिज्ञ छन् । गाउँमा भारतबाट केही नागरिक आएका थिए । तर उनीहरु घर आएको ५० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । भने शुरुमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
कोरोना संक्रमित शिक्षक गाउँका समाजसेवी समेत हुन् । उनको घरमा भाडामा बस्ने बंैकका कर्मचारी ओबबहादुर डाकीँका अनुसार उनी वैशाख ४ गते मालिका गाउँपालिका ६ अर्जैमा विवाहमा गएका थिए । अन्य समयमा गाउँमा सामान्य हिडड्डुल गर्ने, घरको काम गर्ने गर्दथे ।
बैशाख १९ गते तम्घास पुतलिबजार बस्ने एकजना पाहुना उनको घर गए । पाहुनाको ससुराल म्यालपोखरी हो । कम्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएका उनी कक्षा ८ को रिजल्ट कम्युटरमा डिजाइन गर्नको लागि शिक्षकको घरमा पुगेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषि पोखरेलले बताए । त्यही रात दुईजनासँगै बसेर खाना खाएका थिए भने २० गते दुवैजना धुर्कोट गाउँपालिका ७ वाग्लास्थित मानचौर तालमा घुम्न गएको पोखरेलले बताए । ति पाहुना फिर्ता भइसकेपछि उनले घरमै बस्ने, दराज बनाउने, घर डेकोरेसन गर्ने, गाउँमा सामान्य हिडड्डुल गर्ने लगायतका कार्य गरेका थिए । तर कोही पनि शंकास्पद मानिससँग भेटघाट नभएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
बैशाख २८ गते साँझ उनले हल्का टाउनको दुखेको परिवारलाई सुनाए । २९ गते उनी पुर्कोटस्थित एक पोलिक्लिनिकमा पुगे । शिक्षकले टाउको दुखेको, खाना मिठो नहुने र शरीर सामान्य कमजोरी भएको समस्या लिएर क्लिनिक पुगेको क्लिनिक संचालक विष्णु भुसालले बताए । त्यसपछि दुई दिनलाई पुग्ने औषधी दिएपनि ३१ गते पुन क्लिनिकमा बोलाएर रगत जाँच गरियो । जन्डिस देखिएपछि क्लिनिकले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क रिफर गर्यो ।
सन्धिखर्कस्थित छाँया पोलिक्लिनिकमा पनि उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई थप उपचारका लागि बुटबलस्थित क्रिम्सन अस्पताल रिफर गरिएको भुसालले बताए । त्यति बेलासम्म उनलाई टाइफाइड, जन्डिस र मृगौलाको समस्या देखिएको थियो । सन्धिखर्कसम्म एकजना साथीको सहयोगमा मोटरसाइकलमा गएका उनी सन्धिखर्कदेखि बुटबलसम्म भने एम्बुलेन्समा पुगेका थिए ।
स्वाब संकलनमा त्रुटि, कोरोनाबारे आशंका कायमै
संक्रमित भनिएका शिक्षकलाई कोरोना लागेको हो वा होइन भन्नेबारे अन्योल छ । क्रिम्सन अस्पतालमा जेठ २ गते स्वाब लिने बेला मर्चुवाका एपेन्डिसको उपचार गरेका बिरामी पनि सँगै रहेका थिए । अस्पतालले गुल्मीका शिक्षक र मर्चुवाका बिरामीको स्वाब लियो । तर कुन स्वाब कुन बिरामीको हो भन्ने कुनै खुलाएन । स्वाब लगेको २ दिनपछि भैरहवाबाट फारमको लागि मेल आयो । अस्पतालले बल्ल फारम भरेको मेल पठायो । ५ गते दुईमध्ये एक जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । त्यसपछि अस्पतालले गुल्मीका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सार्वजनिक ग¥यो । तर स्वाब साटफेर भएको हुनसक्ने आफन्तले अनुमान गरेका छन् ।
स्वाब पुनः संकलन गरियो
गुल्मीका शिक्षकलाई मस्तिष्कसम्बन्धी पनि उपचार गरिएको थियो । क्लिनिकका सञ्चालक भुसालका अनुसार त्यसरी उपचार गर्दा ढाडबाट पानी निकाल्नुपर्छ । पानी निकाल्दा उनको अवस्था गम्भीर भयो र पछि अस्पतालले उनलाई नै कोरोना पुष्टि भएको भ्रामक रिपोर्ट निकालेको भुसालले बताए । बुधबार विभिन्न सञ्चार माध्यममा उनको मृत्यु भएको भ्रामक समाचार आएपछि बिहान ११ बजे अस्पतालले आफन्तलाई भेट्न दिएको थियो । स्वाब संकलनमा त्रुटि भएपछि उनका आफन्त र नागरिक समाजले समेत पुनः स्वाब परीक्षणका लागि दबाब दिएका थिए । अन्ततः बुधबार अस्पतालले स्वाब लिएको एक आफन्तलाई उदृत गर्दै पुर्कोटका क्लिनिक सञ्चालक भुसालले बताए । तर अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भनेपछि उपचार नपाएकोले अवस्था झन् गम्भीर हुँदै गएको उनले बताए ।
३० जनाको स्वाब संकलन, १ सय ५० भन्दा बढी सम्पर्कमा
शिक्षकमा कोरोना भेटिएसँगै मदाने गाउँपालिका पूर्णरुपमा सिल गरिएको छ । जेठ १ गतेभन्दा अगाडि उक्त शिक्षकसँग ३५ जना प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन् भने १ सय ५० जना अप्रत्यक्ष रुपमा भेटघाट भएका छन् । ३५ जनामध्ये पाचँजना सुरक्षित होम क्वारेन्टाइनमा रहेकाले स्वाब लिइएको छैन । बाँकी ३० जनाको कोरोना जाचँका लागि स्वाब लिइएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषि पोखरेलले बताए । जसमध्ये परिवारका सबै सदस्य, पोलिक्लिनिकका सम्पूर्ण कर्मचारी, कृषि विकास शाखाका कर्मचारी लगायतको स्वाब लिइएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा अब कोरोनाको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुने भएको छ ।